သတင်း ဆောင်းပါး | The FNG
Category Archives: သတင်း ဆောင်းပါး
November 16, 2017 by 21 South News
ဇင်ဘာ ဘွေ နိုင်ငံ ကို နှစ် ပေါင်း၃၀ ကျော်ကြား အာဏာရှင်ရှင် ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ် လာ ခဲ့သည့် ရောဘတ် မူဂါဘီ ၏ ခောတ် မှာ နိုဝင်ဘာ ဆောင်းဦးည ချမ်း တွင် ကမ္ဘာ သိ ကုန်လွန် သွား ခဲ့ ပြီ […]
May 25, 2016 by 21 South News
By Shibani Mahtani Updated May 22, 2016 11:05 a.m. ET YANGON, Myanmar—Khin Shwe,abusinessman once known for his close ties to Myanmar’s former spy chief, said he tried hard […]
By Pavin Chachavalpongpun A role reversal for Myanmar and Thailand is starkly in the making, as concerns about militarism seem to continue to migrate from the former to the latter […]
January 2, 2015 by 21 South News
” ဒီပဲယင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ သူတွေ က ဒီတိုက်ခိုက်မှု
December 26, 2014 by 21 South News2Comments
တင်ကျော်ကျော်စိုး ဗိုလ်မှုးကြီး အောင်သောင်း အဖြစ် မထင် မရှား မကွေး တိုင်း တ၀တ ဥက္ကဌ ဖြင့် စစ်တပ် မှ အငြိမ်းစာ ယူရန် အသက် နီးကပ် လာ ချိန် ဉ် သူ့ တွင် ထူးထူးခြားခြား နိုင်ငံရေး ရည်မှန်း ချက် ၊ အာဏာအိပ်မက် များ[…]
October 30, 2014 by 21 South News
In November, President Obama will travel to Myanmar to attend the East Asia Summit, which brings togetherabroad range of nations from across the Pacific Rim. It will be […]
သတင်း ဆောင်းပါး, ပြည်ပသတင်း
October 1, 2014 by 21 South News
Photo Essay: after four decades of military dictatorship, Myanmar is taking faltering steps towards democracy. Simon Willis spoke to the photographer Matthias Messmer about capturingacountry withacomplicated […]
သတင်း ဆောင်းပါး, သတင်းဓာတ်ပုံ
Information Minister Aung Kyi and Health Minister Pe Thet Khin Allowed to Resign Myanmar presidential spokesman Ye Htut was nominated Wednesday to be the country’s new minister of information after […]
July 27, 2014 by 21 South News
တင်ကျော်ကျော်စိုး၊ ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် အာဏာ သိမ်းပြီး နောက် မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ၂၆ နှစ် ကြာ အုပ်စိုးသွား ခဲ့ သည့် အာဏာရှင် ဟောင်း ဦးနေ၀င်း အား သူ ၏ နောက်ဆုံး နေ့များ […]
March 7, 2014 by 21 South News
Thursday, March 6, 2014 By Kevin McKiernan Last month, some weeks after I visited Myanmar, state security forces and Buddhist vigilantes massacred at least 48 ethnic Rohingya Muslims, mostly women […]
February 28, 2014 by 21 South News
The FNG (BKK) – ပါလီမန် ၏ ဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် ရာထူး မှ ဖယ်ရှား ခံလိုက်ရသည့် ယူကရိန်း ၀န်ကြီး ချုပ် ဗစ်တာ ယာနူကိုဗစ် သည် ကရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ် ဒေသ ကို ထွက် ပြေး သွား
သတင်း ဆောင်းပါး, ပြည်ပသတင်း, News